Zafra Castle | Vaovao momba ny dia
Sary | Diego Delso Wikipedia
Any amin'ny toerana mitokana ao amin'ny tanànan'ny Campillo de Dueñas, ao amin'ny faritanin'i Guadalajara, ny Zafra Castle dia mijoro am-pitoerana ambony vatolampy lehibe. Ny trano mimanda tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay nitana andraikitra lehibe nandritra ny Spanish Reconquest satria teo anelanelan'ny fanjakana Aragon sy Castile no nisy azy.
Saingy, fantatry ny besinimaro izany noho ny andiany "Game of Thrones" satria io no toerana nofidiana hisolo tena ny Tower of Joy, toerana nahaterahan'i Jon Snow.
Na satria tianao ity andiana nofinofy ity, satria tianao ny trano medieval na noho ny antony roa, eto ambany dia hianarantsika bebe kokoa momba ny tantaran'ny iray amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra ao Guadalajara.
1 Inona ny tantarany?
2 Ahoana no ahatongavana any amin'ny Castle of Zafra?
3 Inona ny fitsidihana hafa hatao any amin'ny faritr'i Molina-Alto Tajo?
3.3 Ny Valan-javaboary Alto Tajo
Inona ny tantarany?
Na dia misy tavela talohan'ny tantaram-piainana aza dia azo lazaina fa ny tantaran'ny Castle of Zafra dia nanomboka tamin'ny fanafihan'ny Visigothic ny Saikinosy Iberia, rehefa nisy miaramila gothika iray naka an'io kianja io tamin'ny Romanina ary nanangana io trano mimanda io teo afovoan'ny Sierra de los Castillejos.
Taty aoriana dia nianjera teo am-pelatanan'ny Miozolomana ny fananganana ary rehefa naverin'i King Alfonso I Battler io dia tamin'ny fotoan'ny famirapiratany no nisy azy io. Hatramin'ny taonjato faha-500 dia misy ny fisehoany ankehitriny ary heverina fa miaramila XNUMX no nampiantrano azy nandritra ny Moyen Âge.
Ny Castle of Zafra dia nandray anjara tamina toko manan-danja amin'ny tantaran'ny Espaniola toy ny fanaovana fahirano an'i Gonzalo Pérez de Lara, Lord of Molina, nataon'ny tafiky ny Mpanjakan'ny Castile Fernando III el Santo, izay nikomy tamin'ny mpanjaka. Koa satria tsy azo vonoina io ary tsy azon'izy ireo ny lapa, dia tsy maintsy nifanaraka ny mpanjaka tamin'ny "Concordia de Zafra", izay tamin'ny fahafatesan'i Don Gonzalo, tanànan'ny Molina de Aragón dia lasa anisan'ny satro-boninahitr'i Castile.
Taorian'ny firaisan'ny fanjakan'ny Aragon sy Castile, ny lapan'i Zafra dia very lanja ara-stratejika ary nianjera nandritra ny taonjato maro. Midika izany fa miharatsy tanteraka ny rafitr'izy ireo izay nifarana tamin'ny sary tany am-boalohany hatramin'ny taona 1971, miaraka amin'ny ezaky ny mpifanila trano tokana, Antonio Sanz Polo, azo atao ny manangana ampahany amin'ny rindrina, ny tilikambo Homage ary ny tilikambo Poniente tafiditra ao amin'ny vatolampy, ka mamerina ity lapa mampamirapiratra ity amin'ny fotoam-pamirapiratany.
Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ny ohatra tsara indrindra amin'ny lapa rock voatahiry manerana an'i Espana izy io fa ny atitany kosa tsy azo tsidihina satria an'ny zafikelin'i Antonio Sanz Polo no tompony.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Castle of Zafra?
Ny zafin'i Zafra dia tsy mora idirana satria amin'ny alàlan'ny làlam-pambolena izay tsy misy tsato-kazo sy feno vato izay fiara fotsiny matetika no miampita indraindray. Ilaina ny GPS hitadiavana sy handehanana mora foana amin'ny trano mimanda.
Misy fomba roa hahazoana ny Castle of Zafra. Avy amin'ny lalana GU-417 izay mampifandray an'i Pobo de Dueñas amin'i Campillo ary avy ao amin'ny tanànan'i Campillo de Dueñas.
Inona ny fitsidihana hafa hatao any amin'ny faritr'i Molina-Alto Tajo?
Sary | Pinterest
Na dia maro aza ny olona tonga eto amin'ity toerana ity hijerena manokana ny Castle of Zafra, satria lava ny dia ary sarotra ny miditra, mamporisika anao aho fenoy ny fitsidihana harena vitsivitsy ananan'ity faritra ity amin'ny manodidina.
Izy io dia iray amin'ireo tanàna medieval tsara indrindra any Espana miaraka amin'ny tetezana taloha, ny fiangonany, ny tapany jiosy ary ny trano fisakafoanana tsara ahafahanao mankafy ny sakafo Castilian-La Mancha. Ho fanampin'izany, izy io koa dia manana iray amin'ireo trano mimanda mahavariana sy lehibe indrindra any Espana fantatra amin'ny anarana hoe trano mimanda ao Molina de los Condes. Aza adino izany!
Izy io dia lohasaha manidina izay sokitra amoron'ny reniranon'i Gallo amin'ny haavon'ny tanàna kelin'i Corduente, izay ampahany amin'ny Alto Tajo Natural Park.
Ny Valan-javaboary Alto Tajo
Ao amin'ny Valan-javaboahary Alto Tajo dia ho hitanao i Espana tsy fantatra miaraka amin'ny sary mahavariana miaraka amin'ny tetezana, lagoons, gorges, monoliths, zoro fijery an-tongotra, lalan-tongotra ary trano ambanivohitra any amin'ny tanàna mahafinaritra toa an'i Cobeta, Poveda de la Sierra, Checa na Zaorejas.)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Zafra Castle